नेपालका सांसदहरु अमेरिका घुमाउनु पर्‍यो भन्दै आइएनजिओसँग भीख माग्छन् Canada Nepal
कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक असोज १९ गते बस्ने, महाधिवेशनको तयारी बिषयमा छलफल
मन्त्री बन्न संविधान बाधक देखिएपछि वामदेव गौतमको ‘एक्सन’
धितोपत्र बजार : थामियो नेप्से
चलचित्र 'रेड वाइन' मा पल र साम्राज्ञीको जोडी
नेपालका सांसदहरु अमेरिका घुमाउनु पर्‍यो भन्दै आइएनजिओसँग भीख माग्छन्
मंसिर ११ २०७६
संसदीय व्यवस्थाको मर्म ’प्रधानमन्त्री’ छान्ने मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीलाई जबाफदेही, सक्रिय र जिम्मेबार बनाउनु पनि हो । हामीले यो व्यवस्था नक्कल त गरÞ्यौं तर यसको आत्मालाई छोडिदियौं । प्रधानमन्त्री संसदीय अभ्यासकै एउटा अङ्ग हो र ऊ सैद्धान्तिक र व्यवहार दुबै रूपमा संसदप्रति निरन्तर जबाफदेही हुन्छ । विकासदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्मका राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमाथि संसदमा गम्भीर छलफल र बहस हुन्छ र त्यस्ता बहसमा प्रधानमन्त्री सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् ।
संसद या प्रतिपक्षमात्र होइन, नागरिक तहबाट उठेका सवालमा समेत प्रधानमन्त्रीले तथ्यपूर्ण जबाफ दिन्छन् । कुनै पनि प्रश्नको जबाफमा थोरै मात्र पनि तथ्य फरक पर्यो भने त्यसको ठूलो असर पर्ने हुनाले देशको अर्थव्यवस्थादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, इतिहास र सुरक्षासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीहरू निरन्तर अध्ययन गर्छन् र सूचना अपडेट गर्छन् ।
उदाहरणका लागि प्राथमिक तहमा शिक्षा सम्बन्धी मुद्दामाथि तिनले बोल्दा देशमा भएका विद्यालयको सङ्ख्या, त्यसमा कुल कक्षाकोठा, शिक्षक सङ्ख्या, शिक्षक र विद्यार्थी अनुपात, रिटायर्ड हुँदै गरेको शिक्षक सङ्ख्या, ठ्याक्क अपुग बजेट र अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा तुलनात्मक स्थितिबारे तिनले गहिरो अध्ययन गरेका हुन्छन् । ठ्याक्क समस्या के हो र त्यसको समाधानको लागि सरकारले चालेको कदम के हो ? रिजल्ट आउने समय कति हो र रिजल्ट नाप्ने इन्डिकेटर केके हुन् ? तिनलाई सुनेपछि कम्तिमा यत्ति ज्ञान हुन्छ ।
हाम्रोमा भने ठ्याक्क उल्टो छ । प्रधानमन्त्री छान्ने काम त संसदको हो तर प्रधानमन्त्री संसदप्रति जबाफदेही हुनु भने पर्दैन । प्रधानमन्त्रीहरू संसदमा छलफल गर्दैनन्, ’सम्बोधन’ गर्छन् । संसदका नियमित बैठकमा जानु त टाढ़ा भयो, संसदीय समितिले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा बोलाउँदा समेत ती जाँदैनन् । अस्ति भर्खर कालापानीको सीमा विवादका विषयमा संसदीय समितिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई छलफलका लागि बोलायो तर प्रधानमन्त्री गएनन् । यो नयाँ घटना होइन, यो बर्सौँदेखि हाम्रो अभ्यास बनेको छ । प्रधानमन्त्री त छोडौं, मन्त्री समेत संसदलाई टेर्दैनन् । निवर्तमान मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई लोकसेवाको ’असमावेशी’ भनेर विरोध भएको परीक्षासम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझ्न संसदीय समितिले धेरै पल्ट बोलायो, तर उनी गएनन् । चीनदेखि भारत भ्रमणसम्म धेरै द्विपक्षीय सम्झौता र सहमति सरकारले गरेको भनियो तर तिनबारे संसदमा कुनै छलफल भएन ।
देशमा हुने ठूला ठूला निर्णयहरू संसदमा र जनस्तरमा व्यापक बहस गरेर होइन, केही शीर्ष नेताहरू बन्द कोठामा बसेर भागशान्तिका रूपमा हुने गरेको छ । सांसदहरूको काम त्यसलाई सदर गर्नेमात्रै हो । देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने जस्तो अतिगम्भीर र संवेदनशील विषयमा समेत संसदमा कुनै छलफल नै नगरी खालि पानामा तिनको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको घटना पुरानो होइन । वाइडबड़ी प्रकरणमा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई डस्टबिनमा मिल्क्याउनकै लागि संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिँदै अर्को छानबिन समिति बन्यो तर त्यसको छानबिन प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । सार्वजनिक पदमा बस्नेको स्वास्थ्य अवस्था र त्यसले परफर्मेन्समा पार्ने असरबारे टिप्पणी गर्नुलाई ’अनैतिक’ मानिनु पनि अचम्म लाग्दो छ । हाम्रा सांसदले हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने त टाढ़ाको कुरो भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले म पहिले प्रश्न गर्छु र तपाईं जबाफ दिनुहोस् भन्दा समेत प्रधानमन्त्रीले ’आफूले पहिले सम्बोधन गर्न पाउनुपर्ने’ ढिपी गर्दै संसदबाट बाहिरिने घटनाहरू देख्न पाइन्छ । आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यले समेत भेट्न र दोहोरो संवाद गर्न नपाएको सार्वजनिक रूपमैं बताउने गरेका छन् ।
हामीले नक्कल गरेको बेलायती मोडल हो र बेलायतमा हरेक हप्ता प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता र आफ्नै सांसदहरूले गरेको कडाभन्दा कडा प्रश्नको सार्वजनिक जबाफ दिन्छन्, तिनले संसदमा छलफल गर्छन् । सरकारका कामकारबाहीबारे जबाफ दिने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीकै हो । प्रधानमन्त्री पद कार्यकारी र अत्यन्तै ’डिमान्डिन्ग’ पद भएकाले पारिवारिक या स्वास्थ्यका कारण हरेक दिनको सक्रियता धान्न नसक्ने अवस्थामा ती आफै पदबाट पन्छिन्छन् ।
हाम्रा सांसदहरूमा पनि आफ्नो पदीय दायित्व र भूमिकाबारे खास ज्ञान देखिन्न । पक्षका सांसदहरूको काम सरकारको बचाउ गर्नु र विपक्षको काम विरोध गर्नु हो भन्नेमा तिनको बुझाइ सीमित देखिन्छ । उसो त ती हरेक महिना जसो विदेश जान्छन्, विदेशी आइएनजिओले स्वदेशमा गर्ने कार्यक्रममा समय बिताउँछन् तर अन्त्यमा मलाई अमेरिका घुमाउनुपर्यो भन्ने भीख माग्छन् । पक्षविपक्षभन्दा माथि उठेर संसदमा तिनले आफ्नो क्षेत्र र विषयबारे बोल्ने गरेको सुनिएको छैन । वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन लगायतका विषयको गम्भीर अध्ययन गरेर नीतिनिर्माण तहमा दबाब दिने क्षमता हाम्रा सांसदमा छैन ।
तर, यो सबैको दोष भने हामी भोटरकै हो । कम्तिमा दायित्व र कर्तव्य बुझेको व्यक्तिले हाम्रो नेतृत्व गरोस् भन्ने हामीलाई छैन । हामी व्यक्तिलाई होइन, झण्डालाई भोट दिन्छौं । सरकारलाई सबैभन्दा बढ़ी आलोचना र निगरानी गर्नुपर्ने तिनले हो जसले भोट दिएका छन्, तर हामीकहाँ भोटसँगै विवेक र आँखा पनि बाकसमा खसालिदिने चलन छ । सुधार जरैदेखि आवश्यक छ । तर सुरु कसले, कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमैं अर्को दशक पनि बित्ने हो कि भन्ने डर पनि छ ।
(यो लेख गाउँलेको फेसबुकबाट लिइएको हो ।)
मंसिर ११, २०७६ बुधवार ०६:२२:०० बजे : प्रकाशित